Real Madrid Oo Ku Hanjabtay Inay Ka Harayso Doonitaankeeda Modric Kadib Markii Laga Diidey £36million - jornalizem
Real Madrid Oo Ku Hanjabtay Inay Ka Harayso Doonitaankeeda Modric Kadib Markii Laga Diidey £36million
Real Madrid ayaa ku hanjabtay inay ka baxayso dooniteeankeedi Luka Modric sababtoo ah kooxda Spurs oo dooneysa in lacag badan marka hore gacanta loo geliyo.
Kooxda ka dhisan dalka Spain ayaa oggolaatay lacag dhan £36million inay ka bixiso ciyaaryahankan reer Croatia. Balse marka hore ayay doonayaan in ay bixiyaan £30million inta soo hartayna ay ku bixiso muddo shan sano ah, iyagoo sheegay in ay siinayaan Modric heshiis ah shan sano.
Hase ahaatee Tottenham guddoomiyaheeda Daniel Levy ayaa ku adkeysanaya in Madrid ay marka hore ay lacagta kaash ka soo dhigto inta soo hartayna ay ku bixiso 12 bilood. Tottenham ayaa dib uga soo laabanaysa safar ay ku tagtay dalka Maraykanka ciyaaro saaxibtinimana kula soo yeelatay naadiyo kala gedisan.
Warar ku dhow dhow White Hart Lane ayaa sheegaya in guddoomiyaha kooxda uu doonayo lacag dhan £40million, balse dad badan waxa ay filayaan in uu aqbalayo lacag intaa kayar balse lacagta lagu bixiyo hormaris.
Sidoo kale wararka qaar ayaa sheegaya in Real Madrid laga yaabo in ay u wareegato ciyaaryahanka kooxda Inter horena ugu ciyaari jirey Madrid Wesley Sneijder kadib markii uu muddo saddex sano u ciyaarayay kooxda Inter.